Ogaden News Agency (ONA) – Labadii shirweyne oo guulo loo aayo ku soo dhamaaday
Labadii shirweyne oo guulo loo aayo ku soo dhamaaday
Waxaa todobaadkan ka socday dalalka Norway iyo Australiya laba shir oo aad muhiim ugu ah halganka umadda Ogadenya ay ugu jiro xaqqa aaya ka-tashigooda. Shirweynihii Jaaliyadaha Ogadenya iyo shirweynihii Ururka Ardayda iyo Dhalinyarada qaaradda Yurub ayaa shalay la soo gabagabeeyay.
Waxaa ka soo baxay go’aamo dhaxalgal ah oo wax weyn ka tari doona shaqada jaaliyadaha iyo dhalinyarada, iyadoo labada shir lagu gorfeeyay mid walba sidii halganka shacabka Ogadenya loo horumarin lahaa, shirqoolada cadawga iyo kuwa uu adeegsanayona looga hortagi lahaa.
Shiwaynahii ururka Dhalinyarada iyo Ardayda ogadeenya oo soo gabagaboobay xalay galinkii dambe oo ka socday magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa waxaa kasoo qaybgaley dhamaan faracyada ay OYSU ku leedahay qaarada Yurub waxaana lagu soo bandhigo warbixino la’isweydaarsaday, wacyi galin, aqoon korodhsi, doodo & afkaaro ay dhalintu isugu ifinaayeen habka ugu sahlan ee dhalinyarada ay si dhab ah uga wada shaqayn karaan himilooyinka OYSU. warbixinadii shirka ay kasoo jeediyeen maamulada faracyada & casharadii kala duwanaa ee lagu qaaday madasha shirka ayaa ahaa kuwo si fiican ay ugu diirsadeen kasoo qaybgalayaasha shirku. Waxaa lagu doortay shirka xoghayaha guud ee qaarada Europe.
Shirweynaha Jaaliyadaha oo markii ugu horeysay sanadkan lagu qabtay dalka Austraaliya magaalada Melbourne, oo formay 1diiJuly, ayaa ahaa midkii 16aad ee Jaaliyadaha Ogadenya ay isugu yimaadaan.
Shirka oo socday 3 maalmood oy ka soo qayb galeen wufuud aad u badan oo ka socota dhamaan Jaaliyadaha Ogadeenya ee caalamka dacaladiisa ah ayaa waxaa kaloo shirka lagu marti qaaday Diplomaasiyiin, madax ka socota dalka Australia iyo dad aad u badan oo Somaali ah. Waxaa iyana ka soo qayb galay wufuud ka socota shucuubta ay gumeysato Itoobiya, sida Oromada, Beni Shanquul, Cafarta iyo Qomiyadaha Konfureed iyo aqoon yahano ku xeel dheer arrimaha Geeska Afrika.
Waxaa si weyn loogu soo bandhigay shirka, maqal iyo muuqaalba, gumaadka iyo gabood falka joogtada ah ee cadowgu uu ku hayo shacabka birma gaydada ah iyo baahida loo qabo in taageero loo fidiyo, isla markaas maxkamad caalami ah la horkeeno dagaal dambiyeedka kuwa galay.
Waxaa mudadii Shirku socday aad loo falan qeeyey dhibaatada shacabka gudaha uu ku hayo cadawga, waxaa kaloo la falanqeeyay guulaha dibad iyo gudaba ee halganka uu gaaray intii u dhexesay labada shirweyne. Waxaa aad loo bogaadiyey kaalinta Ciidanka geesiga ah ee JWXO iyo guulaha ay ka soo hoyiyeen goobaha dadaalka. Waxaa lagu celceliyey in lays garab istaago hiil iyo hooba. Waxaa la ifiyey shirqoolada uu caddowgu ugu talo galay inuu ku curyaamiyo halganka dibad iyo gudaba iyo sidii loo fashilin lahaa shirqooladaas.
Waxaa mudadii uu Shirku socday la soo bandhigay farshaxan hiddaha iyo dhaqank Ogadeenya iyo Ciyaarihii hidda iyo dhaqanka. Gabagabadii Shirka waxaa soo baxay go’aamo dhaxal gal ah qayb wax ku ool ahna ka qaadan doona horumarinka Jaaliyadaha iyo kaalintooda halganka gobonimadoon ee JWXO hogaaminayso.
Ajendhadah Shirka Jaaliyadaha oo ka kooban qodobo muhiim ah ayaa markii si qodo dheer looga dooday waxaa la laga soo saaray go’aamo wax ku ool ah oo kaalin ka qaadan doonta halganka iyo himilada shacabka Ogadeenya dibad iyo gudaba.
halkan wxan kasalamay shacab waynaha ree ogadeniya sida fiican eey qadiyadoo ugu soojedan takale shirkan shir cajiiba ayuu aha sidii iyadoo xoriyada loo dabaldagayoo kale ayay u ee keyd wa farxad ina sha alah sanadkadanbe ogadeniya xora ayan ku qabanayna xalladeehene shirkan cadowga wayanaha wuxuukuyahay dhabarjabin away dad kii quraba joogta la shegayey ama nabad qatay cashir ha unoqoto waxan socda wasa guul mintid midnimo is kutashi wasas guul
shacabka reer ogaadeenia waan salaamayaa laakiin wali mabisla sababtoo ah waxay wali dhgaystaan waxay ilotahay ama in badan oo kamid ahi way iska yimaadaan shirarka wayna ku dibiro dhacsadaan iska dhgaystaan hadalada iyo madadaalada waayo waxaad arkisaa dad daawanaya arimo murugoleh inyar kadibna iska dhaantaynaya oofarxadi kamuuqato meeshana uyimid in uu muujiyo murugo iyo cadho iyo in uu garab istaago dhibanayaasha markaas madhaanto ayaa lagu taageeri saw u ekaanmayso kudigasho halaga fikiro waxa lagu gunaanado shirarka iyo mudaharaadka guul ogadenia allah hagaadhsiiyo hana lagu sugnaado diinta iyo dhaqanka wanaagsan mahadsanidiin
salaan kadib waxaan leehay shacabka Ogaadeeniya Guulaysta.